Weeraro culus oo lagu qaaday degmooyinka Awdheegle iyo Qoryooley. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Weeraro culus oo lagu qaaday degmooyinka Awdheegle iyo Qoryooley.
On Aug 24, 2019 559 0
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weeraro culus waxay ku qaadeen difaacyda ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmooyinka Awdheegle iyo Qoryooley ee kawada tirsan gobolka Shabeellaha hoose.
Dagaalyahanno hubeysan oo katirsan Mujaahidiinta ayaa gudaha u galay Qoryooley, iyagoo halkaas ku fara saaray ciidamada dowladda.
Warar la helayo waxay ku waramayaan in ciidanka dowladda ay ka firxadeen goobihii ay ku sugnaayeen, islamarkaana ay miciin bideen difaacyada Shisheeyaha.
Sidoo kale weerarka lagu qaaday Awdheegle waxa uu ahaa mid aad u culus, oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana jira waxyeello gaartay askarta Maraykanka daacadda u ah ee halkaas joogay.
Dhawaan waxaa Awdheegle ka dhacay weeraro waaweyn oo Nafhurnimo ahaa, kuwaas oo gallaaftay nolosha konton askari, kuna dhaawacmeen todobaatameeyo kale.
Sidoo kale weerarada lagu qaadayo degmada Qoryooley ayaa soo noq noqday, waxaana marka la gaaro habeenkii ay ciidamada dowladda inta badan u hooyadaan difaacyada ciidamada Uganda ku leeyihiin Qoryooley.